Somaliya:-Kiiskii labaad oo Corona laga helay – Idil News
Somaliya:-Kiiskii labaad oo Corona laga helay
Posted By: Idil News Staff March 27, 2020
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowsiya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in kiiskii labaad ee Coronavirus ah ee gudaha Soomaaliya laga helay qof ku sugan magaalada Muqdisho.
Wasiirka oo la hadashay warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in qofka labaad ee laga helay xanuunka Coronavirus uu yahay qof Soomaali ah oo ka yimid dibedda, kaasi oo ka mid ah dad ay karantiileysay dowladda.
“Kiiskaan waa kiiskii labaad ee la helo, baaritaan aan isbuucii hore dirnay ayuu jawaab u ahaa, oo xaqiijiyey xanuunka. Ma ahan qof calamaduhu ay ka muuqdaan, wuxuu ka mid yahay dadka karantiilka ku jira,” ayay tiri wasiir Fowsiya Abiikar Nuur.
Fowsiya ayaa sidoo kale sheegtay in qofka laga heley cudurka COVID-19 hadda xaaladiisa degan tahay, balse ay meel kusii hayn doonaan, siina wadi doonaan baaritaanada illaa uu ka caafimaado, si loo sii daayo.
Wasiirka ma shaacin dalka uu ka yimid qofkan, hase yeeshee dowladda ayaa horey u karantiileysay dad ka yimid dalal ay ku jiraan Shiinaha iyo Talyaaniga oo Soomaali ah.
Dawladda Soomaaliya ayaa 16-kii March xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee Coronavirus ah ee laga helo gudaha Soomaaliya, kaasi oo ahaa muwaadin kasoo laabtay dalka Shiinaha.